Iimpawu ezi-5 ezintsha ze-AutoCAD 2013-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/5 Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2013
Ezinye ezintsha siyibonile kwi kwinguqulelo beta AutoCAD 2013 wabiza emihlathini ukuba olu guqulelo usixelela oko besiya kuba ukubona iintsingiselo Epreli 2012 nyaka, xa kuya ngokusemthethweni kuphehlelelwa; nangona singadli Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2012.
Zisuka nje iindaba ezisele zisaziwa: Ifomathi entsha ye-dwg ka-2013! Kwenzeka ntoni ukuba ayisothusi, kuba siqhele kakubi ukuba siyaqonda ukuba i-AutoDesk iyenza le minyaka mithathu (ngaphambi kokuba ndenze njalo ngonyaka), ke ixesha le-dwg 2010 liphelelwe lixesha, ibiyinto enye ngo-2011 nango-2012. .
Kodwa ukubona ukuba akukho konke okubi, ngoku i-AutoCAD 2013 iilwimi ezininzi (kakuhle, phantse). Akusekho mfuneko ukufakela uguqulelo ngalunye kulwimi oluthile, kodwa unokukhuphela olunye ulwimi kwaye ulifake ... njengoko ezinye iinkqubo zisenza (I-800 iminyaka edlulileyo)
Kukwakho nokuphuculwa kokusebenza kweRibhoni, ngaphezulu kokukhangela imiyalelo. Emva kokuba iRibhoni ifikile, ukusebenza kuye kwandiswa okuyenza ukuba ibe nomtsalane, ngakumbi imeko. Ingabonakala kwimiyalelo enje ngeArray kunye neHatch, endaweni yokuba baphakamise ifestile edadayo eboniswa kwiphalethi yentloko, ukuququzelela ukujonga kuqala kunye nokukhetha ukusebenzisana.
1. Iphaneli yokwamkela
Iphaneli eyamkelekileyo idityanisiwe xa uqala inkqubo, into efana nepaneli uCorel Draw X5 anayo, kunye nokukhetha ukwenza umzobo omtsha, vula esele ikho, vula imizekelo okanye ufumane ukuba yintoni entsha kuhlobo. Ukusebenza kuhle kakhulu, ngakumbi kubasebenzisi abatsha abangenayo kwaye abayifumani into abanokuyenza ngeqhosha elisasazeke kakhulu, kukho ukufikelela kwiividiyo zokuqalisa kunye nokunxibelelana kunxibelelwano lwasentlalweni u-Facebook no-Twitter.
Apha ngezantsi unokukhetha ukunqanda oku xa ungena, kwaye kunokubizwa kwimenyu yoncedo. Uncedo ngoku lunokubakho ngaphandle kweintanethi.
2. Umgca wokuLawula
Kwinguqulelo ye-AutoCAD 2012 ukhetho lokugcwalisa ngokuzenzekelayo imiyalelo longezwa, kwaye nangona oku kuyinto yakudala, kuya kuba nzima ukuba inyamalale ngokupheleleyo. Ngoku ukhetho olunokususwa njengefestile elixhonyiweyo lubekwe, oluzenzekelayo ngokuzenzekelayo kwizinto ezahlukeneyo zokubekwa.
Ikhosi ye-AutoCAD 3D ye-US $ 34.99 kuphela
Kubonakala kum lolunye lolona tshintsho lubalaseleyo lusetyenziswe yi-AutoDesk, eyaqala kwi-AutoCAD 2011, umgca wokuyalela wembali ugcina ubala, ngenxa yoko awuphazamisi umzobo okanye indawo yokusebenza encinci. Nangona sicacisa -kubulela ukungenelela kwelinye lezimvo-Ixhasa umbala kwaye iindlela ezizezinye zomyalelo zibonisa ileta ngombala owahlukileyo, ayintsha; Kodwa ngoku kunokwenzeka ukuba ucofe kukhetho, esikholelwa ukuba ukusetyenziswa kwebhodibhodi kwangaphambili kuya kufa ngokuthe ngcembe, kuba iqhosha lasekunene le mouse lalicaphukisa. Ukongeza, sikholelwa ekubeni ukubanakho ngakumbi kuya kudityaniswa ukuthintela ikhibhodi, njengokungena, indawo okanye isikali.
Nangona yonke into, umgca wolawulo wawusoloko ungcono kuneCkeyin ye-Microstation kwaye iya kubabiza abasebenzisi bendabuko ukuyikhulula; nangona kubasebenzisi ababazi i-AutoCAD ngokokuqala ngqa neRibbon, baya kuqhubeka becinga ukuba ngumsebenzi omdala njengoMyalelo woMyalelo we-DOS.
3. Ukujonga kuqala utshintsho
Okwangoku, ukuba unento ethile ekhethiweyo kunye nepaneli yepropati ephakanyisiwe, akunakwenzeka ukujonga kwangaphambili indlela eya kuphazamiseka ngayo uqala kunye nemigca echokoziweyo. Ayizukuphinda ibe njalo ... utshintsho luhle kakhulu nangona singalindela ukuba lwandiswe kumbono wenguqu yohlobo lomgca, ifonti okanye iipropathi zobukhulu.
4. UMzekelo woXwebhu
Oku kwaphunyezwa kwi-AutoCAD 2012, kwaye kule nguqulo izisa ukuphuculwa okutsha, kulungile ngendlela, ekuphatheni ukusikwa kunye nokuwela izinto ze-3D. Oku kubonakala ngakumbi ekuqanduseleni ukusikeka, ukuphathwa kweentlobo ezahlukeneyo zeeyunithi, ukolulwa komgangatho kunye nokudibanisa imilinganiselo. Nangona oku kunokubakho okuninzi ekuphatheni ubeko, kuncinci kakhulu okufanelekileyo kubasebenzisi kwindawo yoluntu, ngakumbi kuba ingamaza abekwa apho ukuze afune ukuhambelana ne-Inventor (nangoku iimodeli ze-Inventor zinokungeniswa ngaphakathi); Kwicala leBentley kubonakala ngakumbi ngokuphunyezwa kwamacandelo okusika ashukumisayo kwiihypermodels.
5. Inkxaso yamafu ephuzu
Kananjalo ayisiyonto intsha ngokupheleleyo, nangona ngoku ukhetho lubonakala kwiRibhoni phantsi kofako lwe-Insert, kwaye ezinye izakhono ziye zandiswa. Ngelixa uphuculo lokusingathwa kwesalathiso sangaphandle kunye neefayile zeraster ziselusizi (xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo ezixhasa amafomathi angaphezulu kunye nokungabandakanyi kwi-Civil 3D), ulwandiso lwezinto onokukhetha kuzo kwinkxaso ye-pointcloud njengesiqhelo esiqhelekileyo. Ngoku, xa ukhetha into yolu hlobo, iribhoni iyenziwa ngendlela yemeko yokufikelela ngokulula, phakathi kwezi zinto zinokukhethwa kusikwe kwiklip.
Kwakhona kwiipropati zepropati, unokucoca amanqaku athile kwizinto ze-pointcloud.
Ixhasa iifayile zokuskena zohlobo lwe-Faro (fls, fws, xyb) ASCII esemgangathweni (xyz, txt, asc), las, Leica (ptg, pts, ptx) kunye neTopcon (clr, cl3). Indlela esebenza ngayo iyafana nokulayisha iifayile ekubhekiswa kuzo, ukubanakho ukumisela umbala, ubunzulu kunye nokukhetha ukunqunqa.
Kuhleli kubonakala ukuba iyiphatha njani inkumbulo yekhompyuter, ehlala ibubuthathaka kwi-AutoCAD, ukuphuculwa kuthathwa kule nguqulo ka-2013 kwisalathiso kunye nokungeniswa kwebhetshi. Sishiyekile sizibuza ukuba umba uza kuhamba njani nobudlelwane bePointools, obunento yokwenza nento ephunyezwa yi-AutoCAD ngoku, nangona iyile nkampani zifunyenwe yi-Microstation kunye noko baceba ukukwenza ngeDropartes kuya kuba nzima ukunqoba.
Xa ifayile igcinwa kwinguqulo yangaphambili kunokuba i-2013 dwg, isaziso senkqubo yokuguqulwa kokuhambelana.
Ezinye iinguqu ezingabalulekanga
Iphaneli yokubukela ngoku ayisekho kwiTebhu yeVuw kodwa kuLungiselelo
I-thumbnail yokujonga kuqala imidwebo ngoku iyakuboniswa ngakumbi
3D ekusingatheni izinto, mncinane kakhulu, utsalo komhlaba nje egosogoso kunye extrusion kunye PRESSPULL umyalelo ukuba nangona kungekho myalelo omtsha (cacisa), uphakamisa extrusion umgama ukhetho ayisendim into ekhethiweyo.
Xa ukuthumela umda, umyalelo we-regen uyenziwe ngoku, ukwenzela ukuba izangqa zingaphumi njengeipolgoni
I-offset iyakubonwa ngoku kwangaphambili, njengokuba umyalelo ofanayo we-microstation
Ukuchofoza kabini ngoku kusebenze ukuhlela umbhalo
Kukho inkxaso yokugcina efini, unokwabelana kwaye uvule intsebenziswano nge-AutoCAD WS
Kodwa oku kuhlolwa kwangaphambili, malunga neenyanga ze-5 ngaphambi kokuba i-AutoCAD 2013 iqaliswe, ngoko kufuneka silinde ixesha elide; kufana nokuhlaziywa okufanayo ngokufanayo AutoCAD kwi-Mac.
Isiqulatho sesibhengezo se-beta singalandwa ukusuka: https://beta.autodesk.com/
Ukufakela kubandakanya ukuhlaziya i-NET Framework Runtime 4.0, i-Faro SDK, i-DirectX Runtime kunye namanye amathala eencwadi ebonakalayo e-C ++.
Apha ungabona isishwankathelo esipheleleyo iindaba ze-AutoCAD 2013, xa kuthelekiswa nezinye iinguqulelo.
Molweni nonke, ndibona amaphepha aliqela ajongana ne-Autocad kwaye ndibone amagqabantshintshi ngokuchasene nayo, eyam indawo ndiza kukuxelela ukuba i-Autocad inobuhlobo nokuba ngeempawu zayo okanye imiyalelo yayo emifutshane kodwa konke kuxhomekeke kwinto esiza kuyizobela. Kuba ukuba sifuna ukuzoba icandelo loomatshini ngokukhawuleza, ndicebisa ukuba usebenzise i-Inventor, i-SolidWork okanye i-CATIA kwaye ukuba uza kudweba isicwangciso sokwakha kukho i-REVIT, ngaphezulu kweminyaka engama-20 ndisebenzise i-Autocad kwaye ndazoba uyilo, oomatshini, ulwakhiwo, iiplani zepayili. , njl, kwaye indinike iziphumo. EMexico, uninzi lwamashishini amancinci naphakathi asebenzisa i-Autocad hayi inguqulelo yangoku kodwa iinguqulelo ezisukela ku-2000 ukuya ku-2005 okoko ukuthenga inguqulelo entsha minyaka le kuya kubiza, ke umyili kufuneka kwezi nguqulelo. Kulungile ukushwankathela, zonke iisoftware ze-CAD zilungile kwaye nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, nganye inobuhlobo ukuba umyili okanye umyili wenza konke okusemandleni akhe ukuze akwazi ukuyilawula kwaye abe nomonde wokufunda ngokuphathwa kwayo, ngaphandle komonde kunye nomnqweno ukufunda nayiphi na inkqubo esingayi kuyibona njengesixhobo kodwa njengotshaba. Mholweni kubo bonke.
nceda kubo bonke, ndifuna ukwazi indlela yokuqwalasela umlinganiselo okanye itekisi ukwenzela ukuba inemvelaphi kwaye ukuba xa utshintsha umbala wesiqalo uphinde utshintshe.
Digital Digitalcaping uthi:
Sifundisa i-Basic Basic and Advanced Advanced CAD Course for Landscapers, ukusuka kude.
Uyakubona i-ajenda, indlela kunye nolwazi olunzulu kwiwebhusayithi yethu: http://www.paisajismodigital.com/index_esp.htm
Okwangoku i-Basic AutoCAD Course for Landscapers iphakanyiswa kunye ne-50% isaphulelo kwixabiso lohlu.
Ukufumana ulwazi oluninzi, unokusibhala ngeposi uku: cursoadistancia@paisajismodigital.com
Okanye uthethe ngefowuni: (00 34) 93 176 96 53
Inombolo: (+ 34) 93 176 96 53
I-Campus Virtual: http://www.paisajismodigital.com/cursos
Ibhulogi yesayithi: http://www.paisajismodigital.com/blog
mariela acosta uthi:
umntu unokundixelela apho ndingayithenga khona i-autocad ifundo yokufunda ekhaya
ibeka iodolo "filedia" kwaye ingenisa umahluko ochaseneyo nale ikuloo mzuzu. Ndiyathemba ukuba uyayisombulula ingxaki yakho
Jorge Andres uthi:
Ndifakele i-autocad 2013 mac, ndiphosakele kuba ndiye ndangena kwiintsuku ezingama-30, ngoku ndingayenza njani ukuyikroba emva koko ndiyikhuphe kwaye xa ndiyifaka indlela endifanele ukuyenza ngayo ayindenzi ...
Hello! Ndiza usebenzisa 2013 autodesk xa uvula ezofayile ukuba usindiswa Autodesk 2012 okanye 2011, ndiyaqonda ukuba ileta fomati eziliqela des iqwalaselwe ayikhangeleki ngokufanayo, njengoko ndenze ntoni ukuze yonke into kanye ngokufanayo xa usebenza enye inguqulo kwaye kufuneka q kwakhona ukuba balungise izakhiwo.
Ndiyathemba ukuba unokunceda!
umyalelo wokuqalisa iifestile yifayiledia, oku kuya kuvula iwindow
AutoCAD yaye umyalelo elungileyo 2013 Array ayisebenzi njengokuba iinguqulelo ezidlulileyo umntu undixelele ukuba ndingakwazi ukusebenzisa ezifana kusetyenziswa umzekelo AutoCAD 2011?
Ngaba kukho nabani na owaziyo ukuba ndingaya njani kwimodi yakudala kwi-autocad ka-2013 ye-mac ??
Cris n__n uthi:
Ndingayivula njani iFayile ye-Autocad 2012 kwi-2013 ?? esque njengoko ivula .. kodwa akukho nto ibonakala kum .. ..__.
Ndingayifaka njani i-autocad2013 kwimodi yeklasi? Kwakhona, ndinayo ngesiNgesi kwaye andichazi kakuhle. Ndiyabonga
Qala imenyu A> Khetha> Ukubonakalayo> Izinto zefestile> Bonisa iiScroll Bar. kwifestile yokuzoba
Hervin Pinzon uthi:
Cha, ezantsi ekunene i icon ejongeka njengencwadi iiseyile, ifune phaya iinketho ezahlukeneyo, nqakraza kwi imfuno kwaye nangaphezulu kugcina iinkcukacha ezahlukeneyo ..
Kungenxa yomyalelo weFILEDIA ukuba ukhutshaziwe
Khangela inqaku kule ndawo efanayo apho ichazwa indlela yokuyicombulula ngayo.
Molo, xa ndicofa umyalelo othi "vula" umhloli akaveli, into ebonakala ingumgca womyalelo odadayo kunye nedilesi yenqwelomoya evuliweyo yokugqibela. Ndizifumana njani iifestile zomhloli ukuba avele kwakhona?
Jhonk Master uthi:
Umbuzo omnye, kwi-AutoCAD 2013 kwindawo yokusebenza, ngaba imo yeklasikhi kunye nomzobo we-2D kunye nemodeli zanyamalala?
kwikhoneni lesecaleni lesobunxele bhar uza kubona enye inqaku apho uyidonsela kwikona ebonisa umfanekiso omkhulu kwaye ulungele ukuba ube njengeenguqulelo zangaphambili
Ndinombuzo malunga ne-autocad 2013… .ndenza njani ukuba umgca wokuyalela ubukeke ngathi ungaphambili… mkhulu… ndiyabona ukuba incinci kakhulu kwaye andiyithandi….
I-ex3lente iiphakheji ezintsha zibandakanyiwe okanye i-espeo ayinayo ingxaki ye-graxias
SILVER FOX uthi:
Molweni EZIKUDANIYELI AutoCAD YAKHO ABRES izixhobo aza kuvula ongakhetha ukukhetha nokugcina nendlela KHETHA Layisha SAVE THE AutoCAD ASI iya kubona LOKUSEBENZA kwiinguqulelo EDLULILEYO
Molo USUKU KAKUHLE WAKHO AutoCAD 2013 nentambiso yamehlo, ungaqwalasela ukuba wonke umsebenzi wakho IN A vercion KADE ukuze ukwazi ukusebenza zibe VISUALISARLOS nasiphi na esinye version UYA WAYEZA izixhobo zokhetho ezivulelekileyo nokugcina lomnyulayo, UYA utshintsha ingxelo VERSION
Xa ugcine iifayile AutoCAD 2013 ukhethe ukuba usindiswe njengoko 2010 version, akuyi kuba abakwazi ukubona nabo noguqulelo onazo ekhaya lakho.
Ezingxoxo eyunivesithi kwam kufuneka Cad 2013, kodwa ekhaya Ndisebenzisa 2011, yaye nam andikwazi ukuvula arhivo ka 2013, njengoko ndinokuyenza ukuvula kuyo, ungenza okanye kufuneka yokulungisa 2013?
xa ndaqalisa ukusebenzisa iikhompyutha, ngaphandle apho iminyaka kwisikolo samabanga aphakamileyo, kwakukho into wabanjwa ingqalelo yam, de ndadibana AutoCAD (10 version), ngokwazi oku program, ndiye ndaqonda izinto ezininzi ungenza ntoni na aba matshini, evela imidlalo nje, ukuba iinkqubo ekhulile AutoLISP, andinakuze ugqibile yokuphawulwa ngeinki isandla kunye Leroy caba ngaphantsi kakhulu ukuba uhlale satirfecho kunye iziphumo, ngaphandle encambio kunye AutoCAD endiye ndayenza amakhulu okanye amawaka, yaye ngaba yenjineli sibonga kule isixhobo inokwenziwa izibalo ebangela kumzobo (ezenzekelayo)
Kukho ezinye iinkqubo ezihloniphekileyo ezifana ne-archicad, ezinokuthi zibhetele, kuxhomekeke kwisigqibo sokuba ngamnye wethu kufuneka asebenzise.
Andifuni ukusebenzisa AutoCAD kwi 100%, ekubeni ngamnye kuthi iimfuno ezahlukeneyo, kwimeko yam, Ndibe nethamsanqa ukuqala umsebenzi wam malunga ngexesha elifanayo ukuba ilixa AutoCAD, Sisoloko siphambili, ukuze avunyelwe ukuba ibe ngaphezulu abanobuchule.
Ngokukhawuleza usebenzisa imiyalelo echaziweyo, kwaye imouse kuphela ukulawula ukucwangcisa, kunye neprogram ebhaliweyo, unokwenza izinto ezimangalisayo ngokwenene.
hugo ezimhlophe uthi:
Ukubulisa Ndiye ndafunda iimpendulo malunga necar car cad me guitaría idibanisa oku kulandelayo
Xa ndifundayo ukuphatha esi sixhobo yoyilo, bafundiswa ukuphatha imiyalelo emifutshane enjengokwazi imvelaphi yabo, ndinike izifundo ze-auto CAD amatyeli aliqela kwaye ndiye ndabafundisa ukusebenzisa imiyalelo emifutshane kunye nemiyalelo ebonakala iwindow nganye yenkqubo enjalo kodwa eyona nto imbi kukuba kwiiofisi ezininzi. Abaqhubi bavinjelwe yinkqubo kwaye abayazi indlela yokusombulula ingxaki okanye indlela yokuphuma ihlazo kwaye andibonakali ngathi ndiyagxeka ngendlela embi abo baphatha inkqubo ngebhodi yezitshixo kodwa ndiyabaxelela ukuba indlela yokusebenza kuphela nee icon Nabani na ozoba unyana wam uzobe esebenzisa ii-icon kwaye uneminyaka eli-14 ubudala kwaye unamaxesha apho efuna ukusombulula ingxaki kule nto ayizobayo kwaye ukuba ayiveli kwiimpawu azenzayo zikhubazekile, abo bethu basebenzise isoftware ixesha elide bayazi Ndithetha ntoni, andigxeki abo balawulwa ziimpawu kwaye inyani kukuba asiyilawuli inkqubo 100% kodwa 25% kwaye ubuninzi 35/40% esi sixhobo sinoluhlu lwezinto iluncedo kakhulu, icacisa ngakumbi izicwangciso zobukrelekrele. Ngamaspredishithi, ukubala, ukubiza into enjalo, ndincoma ukuba uhlolisise isoftware ngakumbi kwaye uphawule ngayo, kwaye ndicinga ukuba uphuculo kufuneka lwenziwe kwinxalenye ye-3d apho iMicroStation inobungane ngakumbi ukuba ungathi
Kwaye ngenxa yokuba ndingakhange ndifunde nantoni na malunga nokuba i-civil3d 2012 ithatha ixesha elingakanani ukuvula, ukwenza wonke umsebenzi obekiweyo kuyo kunye neyona nto imbi kakhulu ukuba unamafestile amaninzi, ungalala okwethutyana kule nto ilayishayo ... Ngobuchwephesha obukhoyo kunye noomatshini abacela ukuqhuba iinkqubo kwaye le yokugqibela yoluntu 3d 2012 ayibonakali ngathi ndisebenzisa i-autocad 13 yeefestile 3.11 unaphakade kumsebenzi ngamnye ... ngethemba nanjengoko besenza uphuculo oluninzi ngaphandle komzobo ngokukhawuleza njengoko i-autocad 14 yeefestile zijikelezwe! kuba iyeyona nguqulelo intle, andazi ukuba kutheni bengayiphuculi… Enkosi.
Ukuba ufuna isantya, mna sicebisa ukuba uyeke ukusebenzisa AutoCAD uzame Archicad, nditshintshile mna kutshanje yaye nangona i rookie, ArchiCAD nengcaphephe AutoCAD, mna ndihlale ArchiCAD for speed ububele, ukuba bachaze umzobo 3D I Ukuchukumiseka, kufana ne-sketchup yobugcisa, malunga.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ii-scrollbar ezithe tyaba nezithe nkqo ziboniswa njani kwi-autocad 2013? Ndiyisebenzisa okokuqala kwaye andinakushukuma kwiscreen kuba imivalo ayiveli….
Into endiyicingayo kukuba izizukulwana ezitsha, ukuba azinikwa ikhosi njengawe, ziya kuyityeshela ikhibhodi, ngakumbi kumsebenzi we-3D apho imiyalelo ifakwe kwi-tab, into eyayingenakwenziwa ngaphambili. Ukuziqhelanisa nesandla esinye kwimouse, kunye nesinye kwikhibhodi yokuhanjiswa komlomo, umsebenzisi ofunda yedwa, kwikhosi ye-intanethi okanye kwikhosi "yakudala" ngaphandle kokuba nomqeqeshi owazi inzuzo, akayi kuyilungela. .
Ngokucacileyo, ukuba sibeka ochwepheshe ababini ngexesha elinye ukwenza isicwangciso sendlu, bobabini ngamava afanayo, lowo usebenzisa ibhobhodi uya kwenza ngokukhawuleza.
Nangona uqeqesho alukwazi ukuba luya kusebenza ngolu hlobo ukuba lusebenzisa i-vertical version, efana ne-Civil3D okanye i-3D yokwenza imodeli yokwakha.
Claudia Palomo uthi:
Ndifundisa AutoCAD, abafundi bam babonisa iindlela zombini zokwenza izinto: iimpawu kunye nemiyalelo. Ngokugqithiseleyo baphela ukukhetha ukusebenza ngenye yezandla kwibhodibhodi kunye neendawo zokungena kunye nenye isandla kwimouse. Baphuma abanezakhono, ngokukodwa ndifuna kakhulu indlela yokusebenza, ukuba ndisebenze ucocekile, ngokuchanekileyo, ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Ndiqeshe imisebenzi emininzi ngokukhawuleza, kunye nabantu abalawulwa kwiprogram kwaye basebenze ngesivinini, bahlale besenza imiyalelo echaziweyo, abanye bangasebenzisi ibha yomyalelo omnye, makungabikho i-ribbon.
Akukho mntu ndiyifumene ukuba ndiyifake ngokukhawuleza kwaye ichaneke ngokusetyeni imifanekiso. Ixesha elininzi lilahlekile ekuhambeni, nangona ukufuduka kweyona ndawo kuncinci (akunjalo neze 5 cm ukuba imouse igxininisa ukunqumla isikrini).
Ngoko ukuba ikhibhodi iya kubakho ukusetyenziswa kakubi mhlawumbi kulabo abangenayo imfuno yokusebenza ngokukhuphisana.
Ndiyabonga, ndiya kubona
Ukusuka apho uyanciphisa, uzele.
I-AutoCAD yabafundi ihlala kwiinyanga ze-36, yiyo eyi-3 iminyaka.
umntu unokundidlula ikhonkco ukukhuphela le nkqubo nceda
Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha sifuna isixhobo, sikhohlwe ukuba sele sifikelele ukuxazulula umsebenzi esasisenzayo kumbhodi wokudweba.
Kodwa ndicinga ukuba ukuthelekisa kunye neendlela ezizenzayo ezinye iinkqubo zokhuphiswano kusenza sicinge ukuba ukuhamba kwe-AutoCAD kuhamba ngokukhawuleza, ukubonisa umzekelo we-3D.
Kokokuqala ukuba ndingene kwiforum, igama lam ndinguLuis kwaye ndinesiqinisekiso se-ACP AUTODESK, amava amaninzi ngolawulo lwesoftware; Andisebenzisi i-AutoCAD kuphela ukusukela kuguqulelo lwayo lwe-10 kodwa noMhlaba, iMephu, Civil phakathi kwabanye ... khawufane ucinge ... Eyona nto intle eyenziwayo ngelo xesha yayikukungeniswa kwenguqulelo ye-14 ... kunye nohlobo luka-2000 (uxanduva lwegama ngu Iwaka leminyaka elitsha livela kwiWindows 2000, iofisi ka-2000 njl. ulungise imiba ethile kunye nohlobo 4 ndibonakele kwaye ukusuka apha bekungekho lunye utshintsho kwifomu kunangasemva.
Ngokuphathelele ukusetyenziswa keyboard, kubaluleke kakhulu ukuba ukusebenzisa AutoCAD ixesha gca ukuba sisebenzisa zombini mouse kunye nebhodi yezitshixo ngaxeshanye xa umzobo, kuhle ukuba usebenzisa i mouse yenzelwe kwaye yakhiwa kunye nemisebenzi ye AutoCAD.
Yile ndlela thina bantu singabantu, ukuthanda izinto zethu kusoloko kusikhokelela kugxeka oluhlala lungenamveliso. Kodwa yile nto le ndawo, ukuxoxa ngeendaba kunye nokusikelwa umda kwemibuzo. Uninzi lwezinto ezenziwa yi-AutoCAD, zavela ngoluhlobo, ukusuka ekubuzweni kwabasebenzisi ngethemba lokuba izinto ezikhoyo ziya kuphucula.
Siyabonga ngolwazi. Nangona ndimele nditsho ukuba kuyacaphukisa ukubhala kwakhe kwe-sarcastica kwisifundo esingafanelekanga. Abo bethu abasebenzisa le nkqubo bayazi ukuba kukho ukungabikho kwezinto zokuphucula kodwa kuba oko kwaphuma kwaye kwakungummangaliso okanye ukubuza abo babetha ngesandla.
Ngokuphathelele imiyalelo, ndicinga ukuba ininzi yethu ifuna ukufunda yonke imiyalelo ukuze ikwazi ukusebenza kunye "nendawo yemodeli" ngokucocekileyo ngokusemandleni kwaye ngokukhawuleza. Imibuliso kubo bonke oogxa bethu abasebenzisa i-Auto CAD! =)
Kuhle kakhulu kwaye luncedo kakhulu, ndiyishiya lewebhu enezifundo ze-Autocad kunye ne-Revit 2013 zonke izifundo.
kukho ezininzi iividiyo
UJajaj uhleka kwiibinzana ezibuyiselweyo kunye nokutshitshiswa okubanika ukuba bakhululwe ikhibhodi, CLARO! Ukuba nethemba ukuvula iikhomputha kunye / okanye khangela iposi.
Ndicinga ukuba baye bawa ngasemva ngeendlela ezininzi zokuphucula imodyuli, sifanele siphumelele ikhibhodi kunye nemouse, sisebenzisa izikrini ezininzi zokunxibelelana kunye nezixhobo ezininzi eziphathekayo kwaye eziphathekayo ngokukodwa kwimimandla yokwakha kunye nokuyila.
Ukuba ndihlangula oko bathetha ukuba iinguqulelo zabo ezintsha zincinci kwaye ziphantse zero.
Sl2 umakhi wePC
Eddy Guzmán uthi:
Ndingumfundi wokwakha, eyunivesithi apho ndilapha, bafuna ukuba senze i-moderni ngokumalunga neenkqubo esizisebenzisayo ukuyila !! kwaye ndasebenza kwi-autodesk 2004 ukuya kwi-2012,
kunye nokuzimela ngaphandle kokuphuculwa kwezinto zokusebenza kunye nezixhobo zokusebenza, enye yeyona ndlela ikhethileyo yokusebenza yilebhodibhodi, kuyinyani ukuba kufuneka ube nekhono kunye namava aneleyo, inyaniso elula yokusebenzisa i-mause ithatha ixesha elingapheliyo, ndicinga ukuba isisombululo kuphela kubantu abanamava ngebhodibhodi, izizukulwana ezitsha zisetyenziselwa imifanekiso!
jose luis vazquez parra uthi:
Ndingathanda ukuba ungithumelele ukuqinisekiswa kwe-autocad entsha kunye neendlela ezichanekileyo zokusebenzisa izixhobo ngexesha.
Juan C uthi:
!!! Andazi nyani ukuba abo bethu balapha babuyela umva kakhulu! okanye indoda engenayo ikhibhodi ihambele phambili kakhulu !! Ndizamile i-autocad entsha emva kokuzinyanzela ukuba ndiyenze ngo-2012, endiyinyamezelayo ngokwenyani! kum ndihlala kwi-2004 okanye kwi-2006 ubuninzi! xa ndingasebenza kwi-3d ngaphandle kwamaphepha amaninzi okonakalisa umthunzi kwiscreen nezinto ezinjalo ... Ndicinga ukuba sonke siyazi ukuba eli lishishini kwaye ukusukela kwinguqulelo ka-2007 abasakwazi ukuba benzeni ngenkqubo engaguqukiyo kwaphela Kubalulekile ... bazimisele ukuyenza ibe ligama elinokuthi nabani na angene kwaye alisebenzise kwaye alikho..kusithathe lonke ixesha ukuyazi kakuhle ukuba umntu oqala ukuza asixelele ukuba ebomini bakhe kufanele ukuba wenze iprojekthi ngokuchasene nexesha ikhibhodi iphelelwe lixesha ... iyamangalisa!
LUIS ALEXANDER uthi:
NGOKUQINISEKILEYO, ABASEBENZISI ABATSHA be-AUTOCAD AKUMELE BAFUMANE I-keyboard "IYAFANELEKA" KWAYE ISEBENZA, ABAQHELEKILEYO UKUBA BAYAZI INKQUBO KWAYE ABALINIKAZI IXESHA OLIFUMANAYO NGO"KUchwetheziwe" ILETA UZE UNGENE NESPACEBAR NGAPHANDLE KOKUBA NDIHAMBE UKUBA NDIHAMBE. , NANGONA ZIBONAKALA NGAKUMBI KAKHULU KWI-SCRIEN, NGAMAXESHA AKUSENZI KWAYE INTO ABAYENZAYO KUKUTHATHA ISITHUBA ESIKWINI.
NGAPHANDLE AMATHANDABUZO abacombululi AutoCAD EZIZISWE IMBALASANE AND siwuphucula (ingakumbi umntu onjengam abasebenza ukusuka R12) ephuculweyo MUCHISIMO Ujongano ingakumbi ULAWULO benkumbulo (KUZIPHINDEZELELA TECHNOLOGY OF PC NGOKU nawuphi nkqubo ukubaleka ezamahala, i7, 16GbRAM, VIDEO4Gb, njl).
… NDINOKUTHANDA UKUBONA ISENZO SOMNYE WABAHLOBO BAKHO ABATHI UKUSETYENZISWA KWEBHODI LOKUGQIBELA KULUNGELELWE UKUBA KUFUNEKA BASEBENZE NOMNTU, NGOMzekelo ... UMFANEKISO UMELE USETYENZISWE KWI-AUTOCAD!
Ewe kufuneka uyenze, ugcine kwaye ukhethe uguqulelo olufunwa ngumthengi wakho. Okanye ukuba akunjalo, sebenzisa isiguquli sokwenyani se-Autodesk, simahla kwaye sivumela utshintsho kwiinguqulelo ezahlukeneyo
alan toledo uthi:
Ndenza ezinye moya ezininzi AutoCAD 2013 kodwa ekubasuseni kwam LOMXUMI OKO ME MHLAWUMBI NOT NGOKUBALISWA VULA Zinelungelo yinguqulelo 2010 2009 OKANYE NJENGOKO NTONI UNAKO Vulani UXWEBHU?
Patricia Moncada uthi:
Sawubona, umntu unokundichazela ukuba ndingayilungisa njani i-Autocad 2013. Ndiyabonga
Ewe, imibuliso kubo bonke.
Ziziphi iinguqulelo zeCad, zilungile xa zingazichaphazeli ukusebenza komsebenzi.
Into endingacingi ukuba isengqiqweni kukusebenzisa inguqulelo yale mihla, kuba nje “yeyona yamva nje”.
Ndingomnye wabo bacinga ukuba iinkqubo, ukuba nje ziyahambelana nabanye… phosa iimayile.
Okwesibini ucela, oko kwenziwa ngeebhloko umyalelo, angaphendla i-Internet, ubone ukuba kukho ifanitshala kunye 3D okanye 2D wenza kuphela ukufaka.
Kwakhona i-AutoCAD izisa iZiko loKwakha, apho kukho iibhloko.
christopher olivares s uthi:
nceda wonk 'ubani unomdla, Ndingathanda ukwazi indlela yokusika i-maya eyenziwa nge-extrusion ukwenza ifestile kwi-autocad 2013
into yesibini Ndingathanda ukwazi nendlela agregarles izinto ezilula ukuba igumbi, ndithetha, xa usenza ekhitshini Ndithanda ukubeka ifenitshala ikhitshi, itafile, izitulo, etc
PD: Ndingathanda ukuthumela ulwazi kwiposi
Marina Forteza Sureda uthi:
Mholweni. Ndingathanda ukwazi: Ndinomqeqeshi ka-2013 we-mac (Kungenxa yesiNgesi) ihlala igcinwe ngo-2013 umqeqeshi kwaye andifumani ndlela yokuyihlela ukuze igcinwe ngokuzenzekelayo kuhlobo lwangaphambili ukuze ndingayibeki ngalo lonke ixesha ndigcina ... ngamanye amaxesha ndiyalibala. Kwi-Autocad yeefestile kwakulula kakhulu ukuyibeka kodwa kwenye ye-mac akukho ndlela yokufumana olu khetho ... Ngaba kukho umntu owaziyo into?
Madoda! Lixesha ukuba zihlaziyiwe, ubeko selivele wangaphandle kokubhalwa kwembali kakhulu, Musa ukoyika ii icon ezintsha adapterse, kunye eyahlukileyo keyboard kufuneka bazi zonke ezimfutshane uniyalela kufuneka ube eninzi zezakhono ngokufanayo kwaye ungathethi ngolwimi olunalo i-Autocad yakho, isiNgesi asifani nesiSpanish. Endisebenza nawo AutoCAD evela R14 kwaye ndiye ezihlaziyiweyo zonke iinguqulelo eziye up namhlanje, ekubeni ukushiya iibar zesixhobo yaba sobulumko ababeyiqwebile kwaye ngoku ziphuculwe ezineeribhoni iinketho (eyayisaziwa ngokuba Iribhoni ), imiyalelo kunye imifanekiso kakhulu, aluncedo kakhulu kwaye kudlula lohlengahlengiso uze wenze indawo yakho ukhululeke ngakumbi kuwe ukuba ukusebenza, ngoko la makhasethi akukho nje kwabasaqalayo ezininzi okhankanywe kodwa ngenxa thina zikhululekile ukuba le mouse ukusetyenziswa encinane kakhulu ikhibhodi becala ukunika imilinganiselo, i-moya ngokukhawuleza kakhulu kwaye ukwazi imiyalelo kuzo zombini IsiNgesi kuba anteriomente wangena kule ulwimi njengoko iSpanish ukuba namhlanje yimfuneko ukuba ufune Inkqubo kule nguqulelo kodwa nje ubuyekeze ulwimi kwaye uyenziwe. njengoko ndiyazi iindlela ezimfutshane zebhodi, kodwa ukuba AutoCAD iye imiyalelo ezininzi kangangokuba kube nzima kubo bonke njengabo bafunde kubo, wasebenzisa zibalulekileyo kuphela yaye kutheni sicebisa ukuba makhe aye kwekhibhodi kwaye usebenzise i mouse bhetele kunokuba kukho.
ISIKHOKELO SOKUBHALA KUNYE NOKUBA NOKUBHALA KWEEMINYE IMITHETHO, KUFANELE IHLAWULWE NOKUHLOLA UKUQHUBA KWENKQUBO NJENGOBA UKUKHATHA I-PLANE
Sergio Lima uthi:
ngokuqinisekileyo ukusetyenziswa kwebhodi yezitshixo kuluncedo kakhulu, iinguqulelo ezintsha zihlengahlengisa "iindlela ezimfutshane" kwimiyalelo efanayo, njengoko kwi-COPY, ngaphambi kwe-Acad2004 kwafuneka ubhale uM kamva kwiikopi ezininzi, kodwa ke oko kwenzeka ngokungagqibekanga, isimbo seRibhoni. Ngaba Indenza umdla kubasebenzisi abatsha, kodwa kubasebenzisi abaphambili kakhulu iyacaphukisa, ubuncinci ndizamile ukuyisebenzisa kwi-Acad2011 kwaye andikwazanga ukuyiqhela, indithathe kabini ixesha elide kuloo veki ndizama ukuyisebenzisa. .
Ukucwangciswa kwemizobo yokujonga akufanele kube nzima
Uyazi ukuba indlela yokusebenzisa kakubi ikhibhodi yenze njani?
Kuba ukuba ubuyisebenzisile ukuqala kwam ukusebenzisa i-AutoCAD, uya kwazi ukuba umthetho ngamnye ubhaliwe (ndisebenzisa i-AutoCAD kwaye ndifundisa ngohlobo lwe-R12). Kancinci sisebenzisa ikhibhodi encinci, kwaye iindlela ezimfutshane ziluncedo, kodwa apha endleleni, ixesha lichithwa xa into iphinda iphindaphindwa. Ngenxa yoko, imiyalelo emininzi apha endleleni yapheliswa, njengecala le-Fence ye-Trim, nangona ikhona kudala, njengabo kuphela ababesazi ukuba kufanelekile ukufaka unobumba F emva komyalelo wocingo, bayeka ukuvela ngenxa yokusetyenziswa okuncinci. Izinto ezinje ngokungena kwevektha ngeebheringi kunye nemigangatho ngokunyanisekileyo yeyamandulo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, abo bethu bafunda ngaphambi kwe-AutoCAD 2009 bafunda ukusebenzisa ikhibhodi ngeendlela ezimfutshane kunye nesitshixo se-scape ngobuchule obukhulu. Kodwa umbuzo wam kukuba okuninzi kunokuphuculwa ngeemenyu zentsingiselo.
Ukusetyenziswa kweArchaic yebhodibhodi? Uyabona ukuba awuzange usebenzise i-autocad, usebenza kuphela ngekhibhodi yinto emangalisayo kwaye yintoni eyenza ixesha elifanelekileyo
H. FLORES uthi:
Andicingi ukuba ukuphatha imiyalelo ngekhibhodi kunokuba yinto yakudala, iyasebenza kwaye igcina ixesha kunokwenza "nge mouse" umzekelo ukwenza "zomm" "Extents"
z ngenisa e-enter (alithathi umzuzwana) kwaye ke walathe ku “E” nge “mouse”
Ndicinga ukuba kunoko kufanele kubonakale ngendlela ephethe umyalelo okanye ngokuklibini kabini kwifayili yemiyalelo echaziweyo (isiko) inokulayishwa okanye ilayishwe ngokukhawuleza
En http://www.peruviantec.tk Ndabona kwakhona iividiyo ze-200 Autocad, ndincoma.
Ukuba ufuna isantya sokwenza izicwangciso, kungcono ukumisela ikhibhodi kwileta enye ngomyalelo kunye ezimbini xa iphindaphindwe (kokonga ixesha), sebenzisa ibha yendawo njengoko ungena. Iimpawu zisetyenziswa ngabaqalayo, okanye zisebenzisa i-autocad kuphela ukuphononongwa kwedatha, okanye abo sele beqhelekile kwaye bengakhangeli iifom ezintsha.
Andiqondi, yintoni isidingo sokukhalaza kwi-Autodesk malunga nendawo engaphezulu yokuzoba ukuba ukusetyenziswa kwesihluthulelo esingundoqo kusinika ukufikelela kwimithetho onokuyilungiselela ngokweemfuno zakho ezivela kumyalelo we-alias, ngoku indawo yokuzoba incanyathiselwe kwiscreen sonke, ngakumbi iindaba ozikhankanyayo zonke zindala ukusuka kwiinguqulelo zangaphambili, nakwabampofu kwaye andifumani nto ifanelekileyo ngaphandle kwefomathi entsha.
MA CL uthi:
Ndine-Autocad 2012, kwinguqulelo yesilingo kwaye ayinakufakwa kwiPC yam. Umyalezo wempazamo uvela kwimveliso nganye, AUTODESK & INVENTOR FUSION ...
Xa uqala ukufaka i-NetFramework 4.0 Runtime, iyayeka kwaye ikhava ivela nge-ERROR imiyalezo.
Ndathatha ikhosi kwaye ndiyivumile kakhulu kwaye ndifuna ukufunda enye imihla, kodwa ndizisola ukuba ndingakwazi ukufaka inkqubo. Ndine HP 610 1262, RAM RAM 8, Intel 5i projekthi
Sele ndibhalisile kwi-beta.autodesk.com, kodwa andiyiqondi indlela yokuba ngu-“betatester”, ewe g! Ngaba unokundichazela, ukuba ndikwazi ukukhuphela i-Autocad 2013, mhlawumbi ayiyi kundinika iingxaki ...
Bhalisa kwi- beta.autodesk.com kwaye apho baya kukunika ulwazi. Ewe, abo bathatha inxaxheba njengomvavanyi we-beta bayayamkela imigaqo ethile ngexesha lokwamkelwa kunye nokugcinwa kunjalo.
Mva kwemini, nabani na kuni ufake i-AutoCAD 2013 Beta RC. Ndingathanda ukukholisa ukuba ungandinika isiXhobo seMveliso, endifuna ukusifaka
Ewe, yinto enye yokusebenzisa amancinci:
L + faka
Z + faka + x + faka
Kodwa ngaphambi kokufika kule nto, ngokuqhelekileyo yonke imiyalelo ibhaliwe.
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba kukho izinto malunga nokusebenza kwemiyalelo enokwenziwa lula, ngakumbi xa iphindaphindwa. Kwimeko, bhala isicatshulwa somgca ngamnye, kuya kufuneka ubonise ubungakanani kunye nokuqhelaniswa, xa kunokuba yinto esebenzayo ngakumbi.
XABIER CARRIZO uthi:
'Ukusetyenziswa kwangaphambili kwebhodibhodi' kukusetyenziswa okwenziwa namhlanje. Kubonakala ngathi akukho mntu uqaphele iikhilomitha ezenziwa kwiscreen,
ngokumhambisa imouse ukuya kumyalelo (icon) uze ubuyele apho udweba khona. Ungakhankanyi indawo kwiskrini ehlala kuyo yonke imivalo, iteksi, njl.
Oko kuthatha indawo ukudweba, kwaye ufundise abantu ukuba unokusebenza ngezandla zombini, ngeemyalelo ezifingqiweyo, njl njl.
Enkosi info, kodwa kubonakala ukuba andazi njani luncedo ngayo ukusebenzela ibhodi yezitshixo kunye indlela ekhawuleza ngayo onokusondela ugcino ndinika unqakrazo ezininzi nokukhangela icon ukwenza into, hayi nje AutoCAD kodwa zonke iinkqubo, nina Nditsho oku kumava kwaye ngenxa yokuba ndiyibonile iingcali ezininzi esebenza yezitshixo imiyalelo Wamnika ukuzoba nesantya mkhulu kunomntu osebenza kuphela ngemouse kwaye icon. Ukubulisa
UTito Machicado uthi:
I-Autocad idinga ukukhulisa umsebenzi kumgca ophindwe kabini, ngaphezu kwendlela yokuzenzekelayo. Ukwandisa izixhobo zokusika, ngokufutshane, phuhlisa umsebenzi ophakamileyo kwi-2d.
Ezinye iinguqulelo kunye ne-autocad 2012 inabo, ngokubhekiselele kwikhomenti yokushiya ikhibhodi ibonakala ingenangqondo. imihla ngemihla kudideka kakhulu ukusebenza kwii-interfaces ezintsha, nangona iinqamfutshane zebhobhobhodi zihlala ziba njalo kungakhathaliseki ukuba ikhibhodi iyisoloko imangalisa.
Ndiza kubona ukuba zeziphi iziphumo ezi zinto ezitsha kwizakhiwo ezizenzekelayo. mbulela ulwazi
Jorge Cardoze uthi:
Into entsha eyenza i-2013 iqokelele https://beta.autodesk.com/
Zininzi zezixhobo ozibonisa ukuba zintsha, sele zinazo kwiinguqulelo zika-2012 kwaye ezinye ngo-2011, njengenkxaso ngamafu ephuzu, kungasathethi ke ngombala wombhalo kunye nokubonakala elayini yomyalelo. Omnye umyalelo ongeyonto intsha yiPresspull. Ndicinga ukuba awuhlaziywa njalo ...